2 Inch Spacers China Manufacturers & Suppliers & Factory
2 Inch Spacers - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-2 Inch Spacers)
Yenza ngokwezifiso i-Hex Round 2 Inch Spacers
Yenza ngokwezifiso i-Hex Round 2 Inch Spacers Yenza ngokwezifiso i-Hex Round 2 Inch S I-pacers Incazelo Lawa ma-maleyili wesilisa / owesifazana owenziwe nge-nylon, aklanyelwe ukufakwa ngesandla futhi awadingi imishini yokuhlangana. Ama-hex standoffs alungele uhlelo olubanzi lwezinhlelo zokusebenza futhi alungele...
Esiwusizo Hex Round 1 Inch Spacers
I-Model No.: HC-SN0003
Esiwusizo Hex Round 1 Inch Spacers / Nylon Standoffs Lezi zilungele ukubeka ibhodi lakho endaweni ebiyelwe, noma ukuyikhuphuka nje etafuleni. I-nylon emnyama izonikeza iphrojekthi yakho ukubukeka okuhle kakhulu. I-Plastic Nylon Standoffs iyingxenye yethu yokwandisa amakhothoji womkhiqizo, nawo enziwe nge-naylon,...
Izingqondo ze-RC kuma-spacers ezingqondo ezinemibala eminingi
Izingqondo ze-RC kuma-spacers ezingqondo ezinemibala eminingi Izici ze-Aluminium Standoff's: 1. Maphakathi nama-standoffs ahlanzekile.Tholwe zombili izinhlangothi kanye ne-Thru-Hole Standoff phakathi 2. Idabula umgodi, ngakho ilula kakhulu futhi iphephe futhi ishesha ngokwengeziwe. 3. Ingasetshenziswa njengenduku...
1/4 inch serated hex flange Ilokhi nuts Amantongomane ethu ajwayelekile yi-M3. Futhi singasiza amakhasimende ethu amakha nati ngokwezifiso. Uma nje ungadweba, singakusiza wenze ngezifiso. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut...
I-Model No.: HC-SN0005
Ifektri Hex Round Bolt kuma-Spacers / i-Nylon Hex Threaded Standoff Factory Nylon Standoff Incazelo 1. Ukucaciswa kohlobo kuqedile, ikhwalithi ithembekile. 2. Ungalokothi ukugqwala, muhle, kusebenze, kuhlala isikhathi eside futhi kufanelekile ukukusebenzisa. 3. I-Nylon inezimpawu zokufakelwa amandla, i-Non-Magnetic,...
2 Inch Spacers 1 Inch Spacers I-Hex Round 2 Inch Spacers I-Hex Round 1 Inch Spacers Hex Nylon Spacers 4 I-Aluminium Spacers Round Nylon Spacers I-M3 Anacised Spacer